Banyere Anyị - Jiangsu KingRay mejupụtara Ihe Co., Ltd
PTFE Teflon faiba glaasi ...
Anti-static okpomọkụ eguzogide ọgwụ ...
Okpomọkụ Merie Non Stick ...
Elu okpomọkụ Merie ...
PTFE ntekwasa faiba glaasi ...
Nonstick Mkpa Teflon ...
Magburu onwe Hapụ Property ...
PTFE mbughari mkpuchi ...
Porous PTFE Fabric nke ...
Porous PTFE ákwà na ...
PTFE breathable ákwà ...
Wind Agụba akpụzi Bee ...
PTFE ntekwasa Glassfiber ...
PTFE Mmiri na mpempe akwụkwọ
PTFE Teflon oven ute
PTFE tosta Bag
Grịl-Haus PTFE oven nkata
PTFE Teflon ebu ...
N'uwe Fusing Machinery ...
Agụụ draya Machinery ...
Herb Ọwara draya ...
Malt agụụ draya ...
Latex ụfụfụ Laminating ...
Ntụ ntụ Separater Teflon ...
Mejupụtara ebu ...
Teflon Bee Plies for ...
Wind Energy Agụba ...
Wind tobaim Agụba ...
Wind tobaim agụụ ...
PTFE ntekwasa akpụkpọ ahụ ...
Mgbatị Construction ...
Ịkwanyere Windows ịgbado ọkụ ...
PTFE Teflon nyagide
Self nrapado PTFE ...
High Okpomọkụ eguzogide ọgwụ ...
PTFE Ịgba masking ...
Kwes Ịgba masking ...
PTFE nrapado Mezie ...
Okpomọkụ eguzogide ọgwụ PTFE ...
PTFE faiba glaasi Indu ...
Pure Teflon faiba glaasi ...
PTFE Teflon Mepee ...
PTFE ntupu ebu ...
PTFE ntekwasa Non osisi ...
Non-arapara Okpomọkụ Resi ...
PTFE oghe ntupu ...
Na-abụghị osisi High-temp ...
Akwa nhicha mbukota Mach ...
Non Stick Mkpa ...
Silicone roba ...
Ugboro abụọ Side Silicone ...
Jiangsu KingRay mejupụtara Ihe Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke PTFE / Teflon enweghị nkebi fusing eriri, Teflon Laminator Hapụ Fabric / Teflon faiba glaasi ákwà, Teflon faiba glaasi nyagide ákwà, Teflon faiba glaasi ntupu belt, Teflon oven linner, Teflon ngwa ndakwa nri draya belt, Teflon okpomọkụ akara belt, Teflon Separater Hapụ echebe, silicone roba ákwà. Na elu na ngwá na teknụzụ.
Anyị gafere ISO9001 na Germany DQS Nyocha na anụ ụlọ ahụ ahia. Ebe ọ bụ na oruru, anyị anọwo na-agbasochi ihe enterprise mmụọ nke "iche iche, Technicalization, n'ọtụtụ, Ndị mmadụ mbụ, na Innovation."
Anyị ike ogologo oge mmekọrịta ụfọdụ ama n'ibu emepụta ma n'ụlọ na mba ọzọ, dị ka Veit GmbH, Hashima, Oshima, Summit, na KDK ụlọ ọrụ. Anyị na ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe, exported na ihe karịrị 20 mba na mpaghara, na merie ahịa 'ntụkwasị obi na otuto.
Anyị ji n'aka na anyị elu àgwà ngwaahịa na magburu onwe ọrụ ga-adọta ndị ọzọ na ndị ọzọ ahịa 'ekele. Ịkpọtụrụ anyị bụ nzọụkwụ mbụ na-ewuli elu a nke ọma ahịa mmekọrịta anyị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na ihe ọ bụla nke anyị na ngwaahịa, biko chere free ileta anyị website ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo maka ozi ndị ọzọ. Anyị na-atụ anya na-ekwenyere ndị ị na n'ọdịnihu dị nso.
Okwu: Jiangsu KingRay mejupụtara Ihe Co., Ltd.